सामसङ ग्यालेक्सी ए–३२ मा के के छन् बिशेषता ? पूरा पढ्नु होला । | Khabar Sadan खबर सदन
Home सूचना-प्रविधि सामसङ ग्यालेक्सी ए–३२ मा के के छन् बिशेषता ? पूरा पढ्नु होला...
ग्यालेक्सी ए–३२ सामसङको ग्यालेक्सी ए सिरिजको उत्पादन हो। यसको डिजाइन झट्ट हेर्दा ग्यालेक्सी ए–७२ जस्तै देखिन्छ।
यो फोनको तौल १८४ ग्राम छ र मोटाइ ८.४ एमएम छ। त्यसैले यो हलुका छ र हातमा समात्न त्यति गाह्रो हुँदैन।
ग्यालेक्सी ए–३२ मा ६.४ इन्चको सुपर एमोलेड डिस्प्ले छ। यो डिस्प्लेले फोनमा कम पावर खपत गर्छ र पिक्चर क्वालिटी पनि स्पष्ट हुन्छ।
त्यसैगरी यो फोनमा ९० हर्जको स्क्रिन रिफ्रेस रेट छ। यो फिचरबाट हामीले निकै स्मुथ स्क्रोलिङ र रिफ्रेस रेट पाउन सक्छौं। यदि ग्राहकलाई आफ्नो फोनको ब्याट्री खपत गरेर स्क्रिनको रिफ्रेस रेट बढाउन मनलागेमा ६० हर्जको स्क्रिन रिफ्रेस रेटको अप्सन पनि यो फोनमा पाइन्छ।
प्रयोगकर्ताले आफ्नो इच्छा अनुसार सेटिङको मोसन स्मुथनेस अप्सनमा गएर ‘हाइ’ अर्थात् ९० हर्ज अथवा ‘स्टान्डर्ड’ अर्थात् ६० हर्जको रिफ्रेस रेट रोज्न सक्छन्।
यो फोनको डिस्प्ले फराकिलो भएको हामीलाई भिडिओ हेर्न पनि सजिलो हुन्छ। हाम्रो आँखाको सहजताको लागि फोनमा ‘आइ कम्फर्ट स्लिड’ छ। राति फोन चलाउँदा अथवा लामो समय स्क्रिन हेरिरहनु परे यो अप्सन अन गरेर चलाउँदा आँखालाई कम तनाव पर्छ।
फोनमा कलर टेम्परेचर र डार्क मोड अप्सन पनि छ। यी फिचरले हाम्रो आँखालाई कम तनाव दिन्छ। सामसङले आफ्ना ग्राहकको सहजतालाई ध्यानमा राखेर ल्याएको यस्ता फिचर साँच्चिकै उपयोगी छ।
फोनको बाहिरी आवरण हेर्ने हो भने यसको दायाँ पट्टी पावर बटन र भोल्युम बटन छ। बायाँ पट्टी फोनको सिम कार्ड हाल्ने ठाउँ छ। यसमा हामीले दुइवटा सिम हाल्न सक्छौं। यदि ग्राहकलाई फोनको स्टोरेज बढाउन परेमा यसको सिम–ट्रेमै मेमोरी कार्ड राख्न सक्नेछन्।
त्यस्तै फोनको तल्लो भागमा ३.५ एमएम हेडफोन ज्याक, टाइप सी चार्जिङ पोर्ट र स्पिकर छ।
फोनको पछाडि पट्टी चारवटा क्यामरा र एलइडी फ्ल्यास लाइट छ।
यो फोनको अगाडि भाग ग्लासले बनेको छ। यसको फ्रेम र पछाडिको भाग प्लास्टिकको छ। ग्लास र प्लास्टिकको निर्माणले गर्दा फोन छुँदा स्मुथ छ। बजारमा ग्यालेक्सी ए–३२ का फोनहरू असम ब्ल्याक, असम ह्वाइट र असम भायोलेट रङमा पाउन सकिन्छ।
ग्यालेक्सी ए–३२ मा भएका चारवटा क्यामरामध्ये मुख्य क्यामरा ३४ मेगापिक्सलको छ। त्यस्तै ८ मेगापिक्सलको अल्ट्रवाइड क्यामरा र ५ मेगापिक्सलको म्याक्रो क्यामरा अनि ५ मेगापिक्सलको डेप्थ सेन्सर क्यामरा पनि यो फोनमा पाइन्छ।
ग्यालेक्सी ए–३२ को यी क्यामरा फिचरबाट ठूलो एंगलमा गुणस्तरीय र स्पष्ट फोटो भिडिओ खिच्न सक्छौं।
फोनमा भिडिओ स्टेबलाइजेसन अप्सन छ। भिडियो खिच्दा धेरै हात हल्लिने र भिडियोको गुणस्तर कम गर्ने समस्या यो फिचरले समाधान गर्छ।
यो फोनमा २० मेगापिक्सलको सेल्फी क्यामरा छ। ग्राहकले यसबाट खिचेका फोटो र भिडिओहरू चित्त बुझ्दो पाउन सक्छन्। फोनमा ५ हजार एमएएचको ब्याट्री पावर छ। प्रयोगकर्ताले धेरै फोटो र भिडियो खिचिरहँदा ब्याट्री सकिने चिन्ता लिनु पर्दैन।
फोनसँगै आउने १५ वाटको अडेप्टरबाट फोनलाई २ घण्टामा नै पूरा चार्ज गर्न सक्छौं। यतिको ब्याट्री पावर भएको फोन दिनभर आनन्दले चलाउन सकिन्छ।
राम्रो ब्याट्री क्षमतासँगै यो फोनमा मिडियाटेक हिलियो जी–८० चिपसेट प्रयोग भएको छ। यसले गर्दा फोन स्लो नभइ राम्ररी चल्छ। गेम खेल्नेहरूका ग्यालेक्सी ए–३२ उपयुक्त हुनसक्छ।
त्यतिका धेरै फिचर भएको यो फोनमा स्टोरेज पनि राम्रै छ। ग्यालेक्सी ए–३२ ६ जिबी र ८ जिबी र्‍याममा उपलब्ध छ। फोनमा १२८ जिबीको इन्टरनल स्टोरेज छ। आफ्ना फोटो र भिडिओ राख्न यतिको स्टोरेजले पुग्छ। यदि तपाईंलाई फोनको स्टोरेज बढाउन मन भए मेमोरी कार्ड हालेर स्टोरेज एक टिबीसम्म बढाउन सकिन्छ।
प्रयोगकर्ताले आफ्नो फोनमा भएका विवरणको सुरक्षाका लागि ग्यालेक्सी ए–३२ मा भएको फिंगरप्रिन्ट सेन्सर र फेस रिकग्निसन सुविधा प्रयोग गर्न सक्छन्। यसबाहेक हामीले लक प्याटर्न र पिन कोड पनि हाल्न सक्छौं।
बजारमा ग्यालेक्सी ए–३२ ४–जी र ५–जी नेटवर्कमा पनि उपलब्ध छ। यदि तपाईं सस्तो मूल्यमा राम्रा फिचर भएको फोन खोजिरहनु भएको छ भने ग्यालेक्सी ए–३२ सही रोजाइ हुनसक्छ।
अहिले नेपाली बजारमा सामसङको ग्यालेक्सी ए–३२ को मूल्य ३१ हजार ९ सय ९९ तोकिएको छ।
SAMSUNG GALAXY A32 5G ( 2021 LATEST)
TFT Display ( thin-Film Transistor)
MEDIATEK DIMENSITY 720 5g (7nm)
VIDEO [email protected] [email protected]/120fps
Previous articleमेमोरी चैम्पियन नेल्सन डेलिसले एक भिडियो बनाएको छन, विजय शाहीको घोटालाको बारेमा
Next articleयस्ता महिलालाइ हुन सक्छ पाठेघरको क्यान्सर, यस्ता सङ्केत देखिन सक्छन् ।
काठमाडौँ – जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई प्रधानमन्त्रीको अफर आएको छ । जसपाका संसदीय दलका नेतासमेत रहेका यादवलाई प्रधानमन्त्रीको अफर आएको हो । उनलाई...
एक साता नेपालको आकाशमा घाम नलाग्ने र बाढीपहिरोको जोखिम बढेको
मौसम विज्ञान विभागले मनसुनको आगमनसँगै यस वर्ष बाढी तथा पहिरोको जोखिममा बढी हुने सम्भावना रहेको उल्लेख गर्दै सतर्कता अपनाउन सबैमा आग्रह गरेको छ। दक्षिण एसियाली...
कोरोनाले नेपालमा छोराकोज्यान गयो र जापानमा भने बाबुको मृत्यु भयो
नेपालमा कोभिड-१९ का कारण एक जना नेपालीको निधन भएको छ । प्रेम (कृष्ण) केसी गुल्मीको वामी घर भएको कोभिड संक्रमणको कारण मृत्यु भएको हो...
के अब बन्‍ने नै हो त सगरमाथामुनी रेलमार्ग ? नेपालमा रेल आउनेनै हो त...
नेपाल र चीनलाई रेलमार्गले जोड्ने विषय लामो समयदेखि बहसमा भए पनि यसले मुर्तरूप पाउन सकेको छैन । चीनको केरुङ आइपुग्‍ने रेललाई नेपाल ल्याउने भनेको...
गण्डकीका मुख्यमन्त्रीले विश्वासकोमत पाएर कम्तिमा एकवर्ष ढुक्क !
गण्डकीका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपालीले विश्वासको मत पाएका छन् । शुक्रबार भएको मतदानमा नेपाली कांग्रेसका १५, माओवादी केन्द्रका ११, राष्ट्रिय जनमोर्चा र जनता समाजवादी पार्टीका...